Zanu-PF Yotsika Madziro Ichiti Inoda Sarudzo Gore Rinouya
Musangano wepagore weZanu-PF uri kuvhurwa zviri pamutemo neChina mubato iri muine makakatanwa pamusoro penyaya yesarudzo.
Vakaoma musoro muZanu-PF vanonzi vari kuda kukurudzira bato iri kuti ribude nechisungo chekuti sarudzo dziitwe gore rinouya kuitira kuti mutungamiri webato iri, VaRobert Mugabe, vatsvage rutsigiro vachakasimba sezvo vokwegura uye paine mutauro wakanyanya pamusoro pehutano hwavo.
Vatungamiri vebato iri vakatanga kusvika muBulawayo neChitatu. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vakaoma musoro ava vari kuda kuti VaMugabe vamanikidze gurukota rezvehupfumi, VaTendai Biti, kuti vashandise mari dzakaiswa parutivi mubhajeti dzinoshandiswa kana paita nhamo dzisingatarisirwe kana kuti "unallocated budget funds" kuti vaite sarudzo.
VaBiti havana kuisa parutivi mari yesarudzo gore rinouya mubhajeti yavo ya2012.
Musangano weZanu-PF uri kutarisirwa kutaura nezvehupfumi pakatariswa nyaya yezvekuendesa hupfumi kuvatema, nyaya dzekurima uye nyaya yekucherwa kwezviwanikwa.
Sachigaro weZanu-PF, VaSimon Khaya Moyo, vanoti panongopera musangano uyu, bato ravo rinobva ratanga kutsvaga rutsigiro.
Vachitaura nebepanhau reDaily News, mutauriri waVaMugabe, VaGeorge Charamba, vanotiwo sarudzo dziri kuitwa gore rinouya kana referendamu yapera.
Asi vamwe vemabhizimisi vanotiwo havasi kuda kuti sarudzo dziitwe gore rinouya sezvo pachigona kuita mhirizhonga inogona kuvhiringa hupfumi hwenyika.
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, uye vari nhengo yeparamende yeZanu-PF, VaWalter Mzembi, vanoti sarudzo ndidzo chete dzinotounza pundutso muhupfumi nekuti hurumende yemubatanidzwa haisi kunyatsoita basa rayo nemazvo nepamusana pemakakatanwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro soro paOxford University, VaPhilip Pasirayi, vanoti zveZanu-PF ndezvekuda kumanikidzira vanhu kuita sarudzo ivo vachiziva kuti hapana zvakawanda zvagadziriswa.